Ch 16 यूहन्ना – 2माछा
घर / बाइबल / यूहन्नाको सुसमाचार / Ch 16 यूहन्ना
16:4 But these things I have spoken to you, ताकि, when the hour for these things will have arrived, you may remember that I told you.
16:8 अनि जब उहाँले आइपुगे छ, he will argue against the world, about sin and about justice and about judgment:
16:9 about sin, साँच्चै, because they have not believed in me;
16:10 about justice, साँच्चै, because I am going to the Father, and you will not see me any longer;
16:11 about judgment, त्यसपछि, because the prince of this world has already been judged.
16:12 म अझै पनि तपाईं यसो भन्न धेरै कुराहरू छन्, तर अब तपाईं तिनीहरूलाई सहन गर्न सक्षम छन्.
16:13 तर जब सत्यको आत्मा आइपुगेको छ, उहाँले तपाईंलाई सारा सत्य सिकाउन हुनेछ. उहाँले देखि बोल्ने हुनेछैन लागि. बरु, जो उहाँले सुन्न हुनेछ, उहाँले बोल्न हुनेछ. र उहाँले आउन छन् कि थोक तिमीहरूलाई घोषणा हुनेछ.
16:14 उहाँले मलाई महिमा गर्नेछ. मेरो के हो त्यो प्राप्त गर्नेछ, र उहाँले तपाईंलाई यो घोषणा हुनेछ.
16:15 पाठका सबै कुराहरू पिता छ मेरो हो. यस कारण, म त्यो मेरो हो के प्राप्त र उहाँले तपाईंलाई यो घोषणा गर्नेछन् भनी भन्नुभयो.
16:17 Then some of his disciples said to one another: "यो के हो, that he is saying to us: ‘A little while, and you will not see me,’ and ‘Againalittle while, and you will see me,'र, ‘For I am going to the Father?'"
16:18 अनि तिनीहरूले भने: "यो के हो, that he is saying, ‘A little while?’ We do not understand what he is saying.”
16:20 Amen, amen, म तपाईंलाई भन्न, तपाईं शोक र रूनु पर्नेछ भनेर, तर संसारमा आनन्दित. र तपाईं निकै saddened गरिनेछ, अझै तपाईँको शोक, आनन्दमा मा गरिएका गरिनेछ.
16:21 एक महिला, जब त्यो जन्म दिने छ, शोक छ, किनभने उनको घण्टा आइपुगेको छ. तर जब त्यो बच्चा जन्म दिनुभएको छ, त्यसपछि त्यो अब कठिनाइ सम्झना, किनभने आनन्द: को लागि एक मानिस संसारमा जन्म गरिएको छ.
16:22 त्यसैले, तिमी पनि, साँच्चै, अब शोक छ. तर म फेरि देख्ने, र आफ्नो हृदय आनन्दित हुनेछ. र कुनै एक तपाईं आफ्नो आनन्द लिन टाढा हुनेछ.
16:23 र, त्यो दिन मा, तिमी मलाई केहि लागि आवेदन हुनेछ. Amen, amen, म तपाईंलाई भन्न, तपाईं मेरो नाम मा केहि लागि पिता सोध्न भने, उहाँले तपाईंलाई दिनुहुनेछ.
16:24 Until now, you have not requested anything in my name. सोध्न, and you shall receive, so that your joy may be full.
16:25 I have spoken these things to you in proverbs. The hour is coming when I will no longer speak to you in proverbs; सट्टा, I will announce to you plainly from the Father.
16:26 त्यो दिन मा, you shall ask in my name, and I do not say to you that I will ask the Father for you.
16:29 उहाँको चेलाहरूले उहाँलाई भने: "हेर, अब तपाईं सीधै बताइरहेका छन् र एक हितोपदेश reciting छैन.
16:30 अब हामी तपाईं सबै कुरा थाहा छ भनेर थाह, र कसैले तपाईंलाई प्रश्न गर्न लागि कुनै आवश्यकता छ कि. यो द्वारा, हामी तपाईंलाई परमेश्वरको गयो भन्ने विश्वास गर्छन्। "
16:31 येशूले जवाफ दिनुभयो: "तपाईं अहिले विश्वास?
16:32 हेर, घडी आउँदै छ, र यो अब आइपुगेको छ, तपाईं छरिएका गरिनेछ गर्दा, आफ्नै प्रत्येक एक, र तपाईंले मलाई पछि छोड, एक्लै. र अझै म एक्लै छैन, पिता लागि मेरो साथ छ.
16:33 म तपाईंलाई भनिएको छ यी कुराहरू, तिमी मलाई शान्ति हुन सक्छ भनेर. संसारमा, तपाईं कठिनाइ हुनेछ. तर भरोसा: म संसारको हटाउन छु। "